Inkqubo yoqoqosho ye-Synchronous FM-CZH / Fmuser Fm Transmitter China Umnxibelelanisi: lanyue whatsapp: +86 13602420401 SKYPE: lanyueokera99991
ikhaya » iindaba » Inkqubo yoqoqosho ye-Synchronous FM
Inkqubo yoqoqosho ye-Synchronous FM
Umhla: 2019-10-16 / udidi: iindaba
Umsasazi wohlobo olufanayo we-FM, usasazo oluDityanisiweyo lwe-FM, usasazo oluhambelana / lomsakazo we-FM, ixesha losasazo lwe-FM / usasazo lomdlalo weradio, frequency FM kunye nenethiwekhi yerediyo:
A FM Inethiwekhi eQhelekileyo yoThungelwano yenethiwekhi yosasazo apho ii-FM-transmitters ezahlukeneyo zithumela iaudio kumaza omoya omnye kunye nexesha elilungelelaniswe ngokupheleleyo. Amanethiwekhi osasazo edijithali afana ne-DVB-T / T2 kunye ne-analog AM kunye neenethiwekhi zerediyo yerediyo inokusebenza ngale ndlela. Inzuzo ye-SFN kukusetyenziswa ngokukuko kwesandi esibanzi, okuvumela inani eliphezulu leenkqubo zerediyo nezeTV ukuba zidluliselwe. Umzekelo wobu buchwephesha bokuhamba rhoqo kunye nexesha elidityanisiweyo lokudluliselwa kwe-FM kwitayile ehamba ngeendlela ezinkulu.
Umngeni omnye wokusebenza ngokugqibeleleyo kwenkqubo enjalo kukuchaneka okuphezulu kakhulu kulungelelwaniso lwexesha (umgangatho womsindo, ukuphazamiseka) komqondiso oza kuhanjiswa.
Usasazo lwehlabathi lusetyenziswa ngeendlela ezahlukeneyo zokusasaza iziqulatho (i-ASI, i-E1, i-satellite, i-IP) ukuphucula ukungafuneki, ukwahluka ngakumbi kunye nokugcina iindleko.
Nakuphi na ukondliwa kokudluliselwa kuMshumeli we-FM, nkqu nokutya okuvumelaniswe kakuhle nge-E1, kuvelisa ukulibaziseka okungafaniyo. Ukulibaziseka kwepakethi engazinzanga ngaphakathi kwe-IP-feed (i-Jitter) okanye isitya seSatellite kunokubangela ukulibaziseka okuphezulu okwenza ulungelelwaniso lweseli lwe-FM lube nzima kakhulu.
Ngokuchanekileyo Isisombululo seenkqubo yenza ukuba umqondiso wakho uhambelane ngokuthe ngqo ngaphakathi kwindlela yegalelo lenethiwekhi ye-FM-SFN.
Kufuneka nje ukongeze i-Inserter eyongezelelweyo kwiNkqubo yokuhambisa ukutya kunye nokunikezela imiqondiso ye-1pps kuzo zonke izitishi. Umamkeli / i-Decoder yethu yobuchule iphonononga imiqondiso kwaye ilungelelanise ngokugqibeleleyo isiginali yeRediyo kwi-Stereo kunye ne-RDS Encoder. Ayenzi mahluko ukuba loluphi uhlobo lonikezelo olusetyenziswayo nokuba yeyiphi i-E1, IP okanye isatellite okanye ukuba kukho nakuphi na kwezi zinto zikhethiweyo ezakhelwe naziphi na iinjongo zokugcina. Oku kubaluleke kakhulu ekuhanjisweni kweSFN ngenxa yokuba isiginali yomqhubi sele kufuneka ilungelelaniswe ngokuchanekileyo.
Amanyathelo ongezelelweyo aya kuba kukudityaniswa kwee-Encoders nabaThumeli abasasaza isiginali ekugqibeleni.
«Ngaphambili: Uyintoni umgaqo wokusebenza kwetradiyo yedijithali yerediyo?
I-FMUSER FBE300 H.264 / H.265 I-Micrododer yeVidiyo yokuguqula ukuguqulelwa kwefomathi yokuguqulela :Okulandelayo "